Phezulu kunye neBlawuzi
Nxiba kwaye utsibe
Ikhefu kunye neSkirt
Umsele kunye neBhatyi
IBlazer kunye neMbasa
Ingqokelela eNtsha yeZns-Ingqokelela yintsholongwane
Sonwabe kakhulu ukuqala uthotho lwethu olutsha lweViral Off Collection.
Ngeli xesha ingakumbi ukuzikhusela ngokukhuselekileyo kubaluleke ngakumbi. Ukuqokelelwa kwentsholongwane kusetyenziselwa ubuchwephesha beViralOff® yobuchwephesha obuya kubonelela ngesiqwengana kunye nentuthuzelo yokhuseleko lomntu. Intsholongwane yokuvala imaski kunye ne-sweatshirt yamkelwe ukwenza i-odolo eyenziwe ngokwezifiso, isitayile esenziwe ngokwezifiso kunye nombala owenziwe ngokwezifiso.
Ngamaxesha enoveli yeCoronavirus, sibona isidingo esikhulu sonyango lweepropathi zentsholongwane. IPolygiene yaqala kwicandelo lokhathalelo ngexesha lokulwa ne-SARS ngo-2004. Ngenxa yemvelaphi yethu, singahamba ngobuchule obufunekayo, izakhono, iindlela, kunye neenkqubo ezifunekayo ukulungiselela ukumiliselwa kwegama lePolygiene ViralOff® - itekhnoloji yonyango lwempahla eyolukiweyo .
IPolygiene ViralOff luphawu lonyango lwamalaphu kunye nezinye iimveliso ezinciphisa intsholongwane ezivavanyiweyo ngama-99% kwiiyure ezimbini. Vumela imveliso iphumle iiyure ezimbini kwaye kulungile ukuya kwakhona. Ukusebenza kakuhle kunye nokuzinza, hlamba kancinci, kuphela xa kukho imfuneko kwaye aluchaphazeli ulusu kuba aluphazamisi iintyatyambo zendalo zesikhumba.
Rm. 1101, Tower 2, Dexin kushishino lokwakha ledijithali, No. 2008 Jinchang Rd., Isithili seYuhang, 311113 Hangzhou, China
Imveliso eshushu - - Imephu - - AMP Iselfowuni